४ महिने बालकको उपचारका लागि आर्थिक सहयोगको अपिल – Saurahaonline.com
४ महिने बालकको उपचारका लागि आर्थिक सहयोगको अपिल
चितवन, साउन ०७ । मकवानपुर कामने–२ हेटौडाका ४ महिने बालक प्रसान लामाको उपचारका लागि आर्थिक सहयोग गर्न उनका परिवारले अपिल गरेका छन् । पारिवारिक आयस्रोत समेत कमजोर भएका कारण उपचार गर्न खर्च नभएपछि लामाका बुबा रत्न र आमा सपना लामाले सहयोगको लागि अपिल गरेका हुन् ।
हाल उनको चितवन मेडिकल कलेज भरतपुरको बाल वार्ड अन्तर्गत पि.आई.सि.यु. मा उपचार भइरहेको छ । प्रसानको जन्मदेखी नै शारिरिक रुपमा विभिन्न समस्याहरु देखिएको थियो ।
अहिले प्रसानलाई निमोनिया, श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्या देखापरेको उपचारमा संलग्न अस्पतालका चिकित्सकले बताएका छन् । चिकित्सकमा अनुसार उनलाई अहिले पनि अक्सिजन दिएर राखिएको छ । सुरुमा सामानय ज्वरो र रुघाखोखी लागेपछि हेटौंडाको एक मेडिकलमा उपचार गराउंदा निको नभएपछि भरतपुर ल्याइएको हो । प्रसानको उपचारमा सहयोगका लागि लियो क्लब अफ चितवन सेन्ट्रलले सहजिकरण गरिरहेको छ ।
प्रसानलाई सहयोग गर्न चाहनेले लुम्बिनी बैंक नारायणगढमा रहेको लियो सेन्ट्रका सचिव विकेक घिमिरेको खाता नं. ०१२०१५७८५ मा रकम जम्मा गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । चितवन लियो सेन्ट्रलको सहजिकरणमा प्रसानको उपचारको लागि हालसम्म १५ हजार ५ सय रुपैंया रकम सञ्चालन भइसकेको क्लबका सचिव विवेक घिमिरेले जानकारी दिएका छन् ।
हालसम्म राष्ट्रिय क्रिकेट खेलाडी मनिता गौतमबाट ५ हजार रुपैंया, लियो चितवन सेन्ट्रकको तर्फबाट ३५ सय रुपैंया संकलन भएको घिमिरेले जानकारी दिएका छन् । यस्तै, लियो ३ सय वि टु नेपालका एरिया ३ का संयोजक महादिप श्रेष्ठबाट २ हजार रुपैंया सहयोग प्राप्त भएको छ । चितवन गल्र्स होस्टेलका प्रबन्धक विष्णु प्रसाद घिमिरे, भरतपुर लियोका पुर्व अध्यक्ष्ँ सन्तोष मजाकोटी, चितवन सेन्ट्रल लायनका निर्वतमान अध्यक्ष्ँ सिताराम देवकोटा, चितवन सेन्ट्रल लायनका सचिव दिपक पोखरेल, डेनोभो क्लोथिन स्टोर टाउन सेन्टर लयान्सचोकबाट पनि १/१ हजार रुपैंया सहयोग प्राप्त भएको छ । आजै विभिन्न व्यक्तिहरुबाट स्ंकलन गरिएको रकम मध्ये ११ हजार ५ सय रुपैया प्रसानका बुबा रत्न लामालाई लियो क्लब अफ चितवन सेन्ट्रलले हस्तान्तरण गरेको छ ।